» शिक्षाको ज्योती नभई बिकाश संभब छैन – अध्यक्षका उमेद्वार दिपक खडका
१६ बैशाख २०७४, शनिबार १८:१९
शिक्षाको ज्योती नभई बिकाश संभब छैन – अध्यक्षका उमेद्वार दिपक खडका
सिधाखबर \_ माओबादी केन्द्रले आसन्न स्थानिय निर्बाचनको लागी हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा न १४ को लागी दिपक खडकालाई अध्यक्षको उमेद्वार बनाएको छ । सर्बसम्मत रुपमा खडकाको अध्यक्षतामा केन्द्रले चमेली सिंन्जाली,चन्द्र बाहदुर स्याक्तान,राम बहादुर लामा,कमला दर्लान सदस्य रहने गरी उमेद्वारतय गरेको हो । चुनाबी प्रचारप्रसारमा रहेको अध्यक्षका प्रतयासी खडका संगै चुनाबी माहोलमा केन्द्रित रही गरीएको कुराकानी
वडा न १४ का जनताहरुको बिश्वास जित्न के के गरीरहनु भएको छ ?
भौगोलिक रुपमा सदरमुकामबाट नजिक रहेपनि हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा न १४ बिकाशको हिसाबले पछाडी छ । शिक्षा,स्वास्थ्य,खानेपानी,यातयात जस्ता क्षेत्रको बिकाशमा मेरो जोड हुने छ । नब्बे प्रतिशत सिमान्तकृत तथा जनजाती बसोबास रहेको मेरो वडा मा शिक्षा क्षेत्रमा अझ प्रभाबकारी रुपमा शिक्षाको ज्योती फैलिएको छैन । मेरो बिचारमा भौतिक संरचना बनेर मात्र हुन्न कि शिक्षाको ज्योती नभई बिकाश संभब छैन त्यसैले मेरो पहिलो कदम भनेकै जनतालाई शिक्षाको ज्योती छर्नु हो । मैले आफनो सहकारी मार्फत यस अघि पनि यस क्षेत्रका बिधालयका बिध्यार्थीहरुमा छात्राबृत्रीको कार्यक्रम्मलाई सहयोग गरीरहेको छु भने सिमान्तकृत चेपाङ्गहरुको लागी शिक्षामा लगानी गरीरहेको छु । जसरी बिधुत प्राधिकरणमा कुलमानले कामगर्नु भएको थियो त्यसैगरी वडा न १४ मा म काम गर्छु भन्ने हिसाबले आएको छु आशा छ जन्ताले बिशवास गर्नु हुनेछ ।
घर दैलो कार्यक्रम्मा जन्ताले कस्तो उत्साह देखाए ?
सबैभन्दा पहिला त मेरो पार्टी माओबादी केन्द्र वडा न १४ ले सर्बसम्मत रुपमा मेरो नेतृत्वमा चुनाबमा भाग लिन मलाई छनौट गरेपछि मैले आफनो प्रचारप्रसारलाई तिब्रता बनाईरहेको छु । जनताहरु एकदम उत्साहजनक रुपमा हुनुहुन्छ लामो समयपछिको स्थानिय चुनाबको माहोलमा वडा न १४ का जनताहरुमा खुसी छाएको पाएको छु । मैले घरदैलो कार्यक्रम्म पनि सम्पन्न गरीसकेको छु । उहा“हरुले अत्यन्तै सकरात्मक ढंगबाट स्वागत समेत गर्नु भएको छ । स्थानिय निर्बाचनमा युवा जोश जा“गर अहिलेको अबस्थामा आबाश्यक्ता रहेको पनि उहा“हरुले बताउनु भएको छ । सही नेतृत्वको लागी म जस्तो समाजसेबीको आबाश्यक्ता रहेको उहा“हरुको भनाई छ ।
रोजगारीको लागी वडा न १४ मा तपाईको योजना ?
हामी वडा न १४ का बासिन्दा भाग्यमानी साबित भैसकेका छौ किन भने काठमान्डौको बालाजुमा रहेको औधोगिक क्षेत्र हाम्रो वडा मा सर्ने सम्पुर्ण कार्य भैसकेको छ । दुई सय दश बिघा जग्गाको डि पि आर पनि भैसकेको छ र काम पनि अघि बढीसकेको अबस्था छ । यहा“ औधोगिक क्षेत्र स्थापना भएपनि हामीले सबै भन्दा पहिला हाम्रो वडाका बेरोजगारीलाई रोजगार दिलाउन पहल गर्ने छौ । यसका लागी जनताहरुले मलाई आफनो मत दिएर त्यो ठा“उमा पुराउनु जरुरी छ । त्यसैले मैले जुन किसिमको योजना र भिजन बनाएको छु यो सफल पार्न जनताकै पहिलो साथ रहनुपर्ने छ । उहा“हरुले बिशवास गर्नुभयो भने अब वडा न १४ मा कोही पनि बिरोजगार हुनुपर्ने अबस्था छैन ।
तपाई समाजसेबी पार्टीगत टिकटमा चुनौती कस्तो देख्नुहुन्छ ?
सहज त छैन,चुनौती नै छ यो हिसाबले चुनौतीमा बिजय हासील गर्न मज्जा पनि छ । पार्टीगत रुपमा पहिलोको माओबादी पार्टी र अहिलेको माओबादी पार्टी धेरै फरक भैसकेको छ । पहिलाका माओबादीहरुले उठाएको आवाज भनेको संबिधान र हक अधिकार थियो अहिलेका माओबादीका आवाज भनेको बिकाश हो । अहिले दलित जनजातीहरुको घरमा पुगेर हाम्रो उमेदवारी बनिदिनुपरयो भन्ने अबस्था बनेको छ । यो सबै माओबादीले ल्याएका एजेण्डाहरुहुन । हिजो दलित जनजातीलाई हेर्ने दृष्ट्रिकोण कस्तो थियो र आज कस्तो बनेको छ भन्ने कुरा सबैलाई अबगतै छ । हिजो बोल्न नसकने महिलाहरु आज जुन सुकै पार्टीमा गएर पनि नेतृत्व गर्ने सकने भएका छन । यि सबै कुराहरु निहाल्दा मलाई लाग्छ हाम्रो पार्टीलाई जन्ताले बुझनेछन र नेतृत्व तहमा पुरायाउनेछन भन्ने मलाई लागेको छ ।
तपाइको एजेण्डा जितकै लागी मात्र सिमित हो कि हारमापनि लागु हुन्छ ?
पहिलो कुरा त चुनाबमा भाग लिएपछि जितनै अगाडी आउछ अब हार भयो भने पनि मैले उठाएका एजेण्डालाई समाजसेबीकै हैसियतले पनि लागुगर्ने छु । मेरो रगतमा समाजसेवा बगीसकेको छ । चुनाबको नतिजाले हारजितको मान राख्दैन । मैले वडा न १४ का जनताहरुको लागी गरेका कार्यहरु सबैलाई थाहा छ । यत्ति फरक हो चुनाब जितेर जा“दा धेरै कामहरु गर्न सकने अबस्था छ । पराजित भएपनि म यहीं ठाउमा बस्ने हो यसै ठा“उको लागी काम गर्ने हो बोलेका कार्यहरु पुरा गर्न सक्ने सार्मथ्य म संग सदा रहने छ ।